Chitatu, Kukadzi 10, 2016 Douglas Karr
Patakafambisa saiti yedu kuenda kuFlywheel, hatina kumanikidza munhu wese muSSL kubatana (iyo https: // url iyo inosimbisa kubatana kwakachengeteka). Hatisati tasarudza pane izvi. Isu tinogona kuve nechokwadi chekuti mafomendi mafomendi uye ecommerce chikamu zvakachengeteka, asi kwete chokwadi nezve ingori yepakati chinyorwa kuverenga. Tichifunga izvozvo, takaona kuti hukama hwedu hwekoniyoni hwairatidza zvese kuchengetedzeka uye kusagadzikana. Handina kuverenga zvakawanda pa